China SF6 gasi rizere switchgear Intelligent switching chiteshi (yekunze mhete network kabati) vagadziri uye vanotengesa | Nady
SF6 gasi rizere switchgear Njere switching chiteshi (yekunze mhete network kabati)
Akangwara switching chiteshi (yekunze mhete network kabhodhi) uchishandisa 12kV / 24kV switchgear, redunhu mudariki, mutoro kupatsanura switch, yazvino transformer, 12kV / 24kV simba PT, kuvhara DTU FTU, PTU, kutaurirana kudzora chiteshi (CCU), 12kV / 24kV metering uye otomatiki mita kuverenga.
Iyo UPS magetsi uye anoratidza zviridzwa akaiswa mune yakasimbiswa hunyoro-chiratidzo isina simbi bhokisi ine inofamba goko, nokudaro kuziva kusangana kwekutanga uye sekondari masisitimu emataundi ekuparadzira network, modularization yegungano, kupfupisa nguva yekuvaka uye zvakanyanya kugadzirisa kuvimbika kwekushanda kwesimba remaguta network
Switchgear ndeye modular yuniti modhi, iyo inogona kusanganiswa zvinoenderana nekushandisa kwakasiyana. Inogona kuve yakakamurwa kuita yakatarwa yuniti mubatanidzwa uye inowedzerwa unit kusangana nekuchinjika kushandiswa kwecompact switchgear munzvimbo dzakasiyana siyana
• SF6 gasi yakazadzwa switchgear Intelligent switching chiteshi iri rakazara chisimbiso system, zvese zvaro zvinorarama zvikamu uye switch zvinovharirwa mune isina simbi dzimba.
• SRM16-12 mhando inflatable switchgear yakakamurwa kuita isiri-inowedzerwa mwero kumisikidzwa uye inowedzerwa mwero kumisikidzwa. Nekuda kwekubatanidzwa kweiyo yakazara module nehafu module uye nekukanganisika kwayo, ine yakasarudzika shanduko.
• SRM16-12 inflatable switch inoshandisa GB standard. Iyo dhizaini hupenyu hwekushanda pasi pemamiriro emumba (20 C) inodarika makore makumi matatu.
Main zvinhu zvigadzirwa
• SRM16-12 akateedzana inflatable kabati SF6 gasi seye arc kudzimisa uye kuputira svikiro.
• Iyo switch kabhodhi yakavharwa zvizere uye yakavharirwa. Mabhazi, switch uye zvikamu zvehupenyu zvakapoteredzwa zvizere mune isina simbi dzimba.
Iyo kamuri izere ne1,4 bar SF6 gasi, uye danho rekudzivirira rinokwira kusvika IP67: Iyo switch yese chishandiso chakasununguka zvachose kubva pesimba rekunze mamiriro ezvinhu, kunyangwe mune pfupi-yenguva mvura kunyudza uye mamwe mamiriro akaipisisa, inogona kuve nechokwadi iyo yakajairwa mashandiro eiyo switch, uye icho chigadzirwa chinogara kwehupenyu-kusagadzikana.
• Iyo switch kabhodhi ine yakakwana "shanu-chiratidzo" chakabatana chinovhara, icho chinobvisa zvachose kutadza kushanda kwevashandi nemidziyo inokonzerwa nekusashanda kwevanhu.
• Makabati ese e switchgear ane nzira dzekuvimbika dzekuchengetedza, kunyangwe muzviitiko zvakanyanya zvinogona kuvimbisa kuchengetedzeka kwevanoshanda.
Switchgear inogona kukamurwa kuita yakagadziriswa unit mubatanidzwa uye inowedzerwa unit mubatanidzwa.
• Iyo switch switch inowanzo kuve neinopinda yekupinda uye yekubuda mitsara, uye inogona zvakare kuwedzeredzwa padivi-kunze mitsara kana mativi-ekunze mitsara zvinoenderana akasiyana ekumisikidza nzvimbo.
• Iyo saizi yemuviri wekabineti iri nyore kuisa, uye inogona kukodzera nzvimbo diki uye mamiriro akashata ezvakatipoteredza.
• switchgear inogona kuve yakagadzirirwa nemagetsi, kure kudzora uye ekuongorora maturusi zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi.
Iyo modular mamiriro iri nyore kupamura nekuchengetedza. uye iyo module inobvumidza vashandisi kukurumidza uye nenzira inononoka kuwedzera uye kudzima iyo dunhu, kuitira kuti vasangane nesimba rekushandisa rekuwedzera kudiwa kwemuchina mukamuri.
Kugovera kabhodhi inowanzo kuve neanodzora otomatiki switch, yekuzviparadzanisa switch, fiyuzi, contactor, relay, magetsi mita, chiratidzo chiratidzo, bhatani, switch uye zvimwe zvemagetsi uye zvemagetsi zvinoriumba, semiconductor zvikamu uye kabhineti.
Iyo otomatiki yekudzora switch, contactor, fiyuzi, kupatsanura switch uye zvimwe zvikamu zvakasarudzwa muhabhineti kabhodhi, kune yakavimbika mashandiro, zviratidzo zvehunyanzvi kusangana nezvinodiwa dhizaini, zvinogona kusangana nezvinodiwa zvebasa remakomputa michina nemidziyo yekubatsira.
Panofanira kunge paine chinja chekukurumidzira mumagetsi ekugovera kabati. Kana paine tsaona yakakomba kana tsaona moto mukamuri yemakomputa, inofanirwa kukwanisa kudzima magetsi emagetsi, magetsi ekuisa magetsi uye nyowani magetsi ePenieni nekukurumidza.
Iyo komputa michina inodzora kugovera kabati inofanirwa kumisikidzwa frequency tafura: yekutarisa yeUPS simba goho frequency frequency.
Magetsi mubazi rega rega rekuparadzira kabhodhi akamisikidza mwenje mwenje, zvichiratidza mamiriro emagetsi ekuvhura nekudzima.
Iyo kabhodhi yekugovera simba inoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvemidziyo yemakomputa uye zvekushandisa zvekubatsira, gadzira chishandiso chinobatanidza chepakati netambo yepasi. Iyo yepakati waya yakasungirirwa kubva kune yepasi tambo uye goko rekabhodhi rekuparadzira.
Bhazi, wiring bar nemhando dzese dzetambo, makondakita, waya dzisina kwadzakarerekera uye waya dzepasi dzinoshandiswa mumagetsi ekuparadzira makabati zvinosangana nematanho emunyika Uye zvinoenderana nezvinopihwa nenyika nerudzi rwechivara, nhamba.
Kana iyo aruminiyamu mutsara mune yesimba rekugovera kabati yakabatana nezvikamu zvemhangura, yakashandiswa aluminium uye mhangura shanduko zvinhu
Iyo yekumisikidza kuita kweyakagovaniswa kabhineti inofanirwa kusangana nezvinodiwa zve20.1.1 mune yenyika yakajairwa GBJ232-82 "Electrical Equipment Hanover Test Standard", iyo kazhinji isingasviki 0.5m Ω.
Mazuva ese avhareji hama humidity asingasviki 95%
Mwedzi pamwedzi paavhareji hama humidity asingasviki 90%
Fiyuzi inoputika chiratidzo
Isolator / pasi chinja chinzvimbo chinongedzo
Pfupi redunhu chiratidzo
Capacitor voltage chiratidzo
Cable chikamu chevhavha
Load disconnect / pasi chinja chinzvimbo chinongedzo
Cable mupanda pabutiro mureza
Bhatani kuvhara / kuvhura mashandiro
Cable chikamu chevhavha pamwe nekuongorora hwindo
Tsvimbo yekutsigira (inobviswa)
Kuzvidzivirira-pachako kudzivirira relay
Vharu redunhu mudariki nzvimbo
Pashure: DFW akateedzana 12kV Yakakwira Voltage Cable Yebhokisi Bhokisi
Zvadaro: FZN25 12KV yemagetsi matatu pole vacuum & vacuum ine fuse mutoro chinja wedunhu mudariki
Magetsi Ekuchinja Chiteshi
Akangwara Kuchinja Chiteshi
Maitiro Ekuchinja Maitiro
Kuchinja Chiteshi Uye Substation
DFW akateedzana 12kV Yakakwira Voltage Cable Yebhokisi Bhokisi